Doorashooyin Aanan Sharciyad Laheyn | marqaati
Doorashooyin Aanan Sharciyad Laheyn
Doorashooyinkii dhacay ilaa maanta ayaa ah kuwo gebi ahaanba la musuq-maasuqay, iyadoo afar hab oo waaweyn loo adeegsaday arrintaas. Habka ugu horreeya waxey aheyd u “xiritaanka” kuraasta musharax gaar ah, iyada oo musharraxa uu keensada “malxiis”is casila kahor intaysan doorashada dhicin. Cod furan ayaa markaa dhaca, taas oo dammaanad qaadaysa in musharraxa keliya uu ku guuleysto cod aqlabiyad ah. 54-ka Senatar ee Aqalka Sare, 22 ka mid ah ayaa sidan lagu doortay. Habka labaad ee lagu musuq maasuqay doorashada ayaa ahaa iyadoo loo diiday musharax aan la rabin in la siiyo warqadda caddeynta amniga. Habka saddexaad waxa uu ahaa in la sameeyo codbixiyeyaal been abuur ah oo aan metelin beelaha ay kursiga ku fadhiyaan – taas oo ahayd in la iska indha tiray oday dhaqameedyadii dhabta ahaa oo cid kale la keensaday. Labadan hab ee ugu dambeeya ayaa inta badan loo adeegsaday doorashada Aqalka Hoose, iyadoo dhammaan musharixiinta aysan dooneyn madaxweynayaasha dowlad goboleedyada (FMS) laga saaray. Habka afraad wuxuu ahaa iyadoo la adeegsanayo dhiirigelin lacageed si loo hubiyo in musharrixiinta la doonayo ay doortaan baarlamaannada FMS iyo ergooyinka doorashada.
Doorashooyinka Aqalka Sare
Doorashooyinka aqalka sare ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubbaland waxaa gabi ahaanba gacanta ku hayay hogaanka maamul goboleedyada. Musharixiinta waxaa lagu soo xushay daacadnimada ay u hayaan madaxda maamul goboleedyada. Xubnaha Baarlamanada maamul goboleedyadan waxaa la siiyay $3000 midkiiba. Musharixiinta ayaa laga sugayay in ay bixiyaan qarashaadka isdiiwaan galinta iyo tan musharaxiinta been abuurka ah. Dhanka kale, musharixiinta qaar ayaa lacagtaas ka helay shaqsiyaadka u tartamaya madaxweynaha ama madaxweynayaasha FMS laftooda.
Saddexda FMS ee HirShabelle, Galmudug iyo Somaliland, musharraxiinta iyaga ayaa si gaar ah lacag u siinayay xildhibaanada FMS yada. Sidii hore oo kale, waxa dhaqaalaha ugu badan ku bixinayay shakhsiyaadka u tartamaya jagada madaxweynaha. Hirshabelle, booska ugu qaalisan ayay musharaxiinta isu geeyntooda bixiyeen $9,000 halkii kursi. Maadaama Hirshabelle ay leedahay 99 xildhibaan oo FMS ah, kursigaas waxaa ku baxay lacag ku dhow hal milyan oo USD. Laaluushka waxaa loo dhiibayay “guddi” ka wakiil ah xildhibaanada. Guddidani waxay iyaguna ku hawlanaayeen bixinta lacagahan.
Maamulka Galmudug, ayaa kuraastii aqalka sare u xiray musharaxiin gaar ah. Musharixiinta la doonayo ayaa laga sugayay in ay keenaan laaluushkooda oo inta badan ahaa $2,000 codkiiba, kuwaas oo u keenaya hogaanka gobolka. Maaddaama Galmudug ay ka kooban tahay 89 xildhibaan, tani waa $178,000 kursi walba. Musharixiinta ayaa dhamaantood waxa ay wateen musharixiin been abuur ah oo is casilay ka hor inta aan doorashada dhicin.
Doorashadii Somaliland ee ka dhacday Muqdisho, lix ka mid ah 11-kii kursi waa la “xidhay”, iyadoo musharrixiinta la doonayo ay wataan musharaxiin been abuur ah. Maaddaama aysan Somaliland jirin madaxweyne ama baarlamaan FMS ah, laaluushku wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu hooseeya, oo ah $ 1000 codkiiba, taas oo u dhiganta $ 54,000 halkii kursi.
Doorashooyinka Aqalka Hoose
Doorashada aqalka hoose way sahlanaatay in lagu shubto sababtoo ah kuma lug lahayn baarlamaanada FMS yada. Halkan, warqadda ammaanku waxay ahayd aaladda ugu weyn ee looga hortago musharraxiinta aanan la rabin. Intaa ka dib, waxaa jiray ergooyin been abuur ah oo ay soo xuleen dad aanan ahayn oday dhaqameedyada dhabta ahaa.
Doorashada ilaa maanta ka dhacday Aqalka Hoose awaxaa u qaalisanaa tan Galmudug oo codkiiba gaaraysa $2,000 ($202,000 halkii kursi), waxaana ugu jaban Koonfur Galbeed oo kursiga ugu jaban uu ahaa $150 codkiiba ($15,300 halkii kursi). Si kastaba ha ahaatee, waxa ay u muuqataa in lacagtaasi inteeda badan aysan gaarin ergada wax dooraneysa ee maamulka Koonfur Galbeed; lacagtaas waxaa lasiiyay dad dullaaliin ah oo matalayey madaxda FMS. Ergada ayaa la siiyay qayb ka mid ah laaluushka dhabta ah ee ay bixiyeen musharixiinta.
Waxa la filan karo iyo talooyinka
Iyadoo inta badan ay harsan tahay doorashada Aqalka Hoose, isla markaana madaxda FMS ay ku mideysan yihiin sida ay wax u socdaan, ayaa waxay u badan tahay in wixii aan aragnay ay sii socon doonaan. Doorashooyinku kaliya ma ahan kuwo sharci darro ah, balse waxay sidoo kale halis gelinayaan in Soomaaliya ay dib ugu laabato dagaal sokeeye. Inkasta oo hawshu lafteedu tahay mid aan dimuqraadi ahayn, haddana xatooyo aan xishood lahayn ee kuraasta ayaa sii wiiqi doonta kalsoonida yar ee ay shacabku ku qabaan geeddi-socodka. Iyadoo siyaasiyiinta iyo qabaa’ilka qaarkood ay ku hanjabeen inay bilaabayaan hannaan is-bar-bar socda, fursadaha rabshadaha ayaa sare u kacaya.
1. Haddii aan musharraxiinta dembi lagu hayn, waa in meesha laga saaro warqadda caddaynta amniga. Haddii musharaxa loo diido sababo amni waa in loo soo bandhigaa sababaha.
2. In aan doorasho kursi lagu qaban iyadoo madax dhaqameedkeedu ay ku adkaysanayaan in codbixiyeyaal been abuur ahi ku lug leeyihiin.
3- In la iska tuuro dhammaan doorashadii aqalka hoose ee la qabtay.
Natiijooyinka qosolka leh
Halkan waxaan ku haynaa liiska dhammaan doorashooyinkii la qabtay ilaa maanta iyo natiijooyinka aan la rumaysan karin ee lagu guuleystay.
Constituency Cidda Gulleysatay Codadka Intuu helay % Qaabka doorashada
Constituency Cidda Guuleysatay Codadka Intuu helay %
Waxaa qormadaan lagu xereeyey Marqaati mark’ay ahayd Diseembar 9, 2021 uu qoray Maxamed Mubarak.
← Xaaladda Isla Xisaabtanka Soomaaliya Sanadka 2020